spiders, बिच्छीको, कीडे, र अन्य विचित्र प्राणीहरू crawling जहाँ बस गुफा Maze बाहिरी संसारलाई देखि पृथक कल्पना गर्नुहोस्। यो अद्वितीय प्राकृतिक घटना वास्तविक ठाउँ भन्दा जूल्स ( "पृथ्वीको केन्द्रमा यात्राको") को भूमिगत संसारमा बरु जस्तो। रोमानिया Movile गुफा, 1986 मा पत्ता, अनुसन्धान वैज्ञानिकहरूले लागि फलदायी स्थान साबित जो पृथ्वीमा सबै भन्दा छुट्टयाएर ठाउँहरू, को छ। तिनीहरूले यो असामान्य गुफा को अध्ययन धरती मा जीवन को उद्भव सहित धेरै प्रश्न, जवाफ प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्छन्।
mutants को हराएको विश्व
1986 मा, निर्माण समयमा, यो गल्ति एक गुफा Movil, काला सागर को पश्चिमी तट नजिकै स्थित छ जो पत्ता थियो। पछि यसलाई धेरै पुस्ताका लागि बाहिर संसारबाट स्पष्ट काटेर थिए अनौठो जीवित प्राणीहरू राज्यका सम्पूर्ण रहस्य प्रकट गरिएको थियो। तिनीहरूमध्ये spiders, leeches, centipedes, beetles, समतल कीडे, जस्तै कण, साथै जलीय जीवन पानी बिच्छीको र कीडे nematodes छन्।
Movile गुफा - एक बन्द वातावरण, अद्वितीयता जो लगभग सबै जीवित जीव सूर्यका ऊर्जा स्वतन्त्र छन् भन्ने तथ्यलाई छ। त्यसैले, कुनै photosynthetic वनस्पति छ। फैंसी कि गुफा पर्खालहरु लाइभ जीवाणुहरु को बाक्लो तहहरू द्वारा बाहिर को हाइड्रोजन sulfide चयापचय को ऊर्जा, द्वारा शह भइरहेको। यी जीवाणुहरु जो बलिरहेको चूना चट्टानहरु मा गुफा-मा स्पेस आन्तरिक मात्रा वृद्धि सल्फ्युरिक एसिड, उत्पादन।
गुफा वातावरण विशेषताहरु
एयर सानो चर्किएको मार्फत गुफा मा लीक, तर वातावरण बाहिर बाट धेरै फरक छ: कार्बन डाइअक्साइड 100 पटक सतहमा भन्दा ठूलो छ, र अक्सिजन 10 पटक कम छ; पनि यो प्राकृतिक सल्फर पानीका मुहानहरू उत्पादित हाइड्रोजन sulfide को एक ठूलो रकम छ। पारंपरिक जनावर अक्सिजन को स्तर मा slightest परिवर्तन गर्न तुरुन्तै प्रतिक्रिया र चाँडै जहाँ अशुद्धताओं हावा मा पत्ता ठाउँ छोड्न प्रयास गर्नुहोस्।
जीव जस्तै चरम अवस्थामा यसको महत्त्वपूर्ण कार्य पूरा गर्न सक्षम छन् कि, उल्लेखनीय सुविधाहरू एक नम्बर छ त गुफा Movil (रोमानिया), बचाउको लागि अपेक्षाकृत कठिन अवस्था द्वारा विशेषता छ। उदाहरणका लागि, एक फिक्का पहेंलो उपस्थिति, सबै जाती को गुफा विशिष्ट सुविधा देखि कुनै रंग रोगन छ। सबै जो आफ्नो भूमि आधारित समकक्षों जस्तै, आठ आँखा छ spiders लागि बाहेक अन्धो जन्मेको छन्। तर समय र आफ्नो दृष्टि superfluous रूपमा हराएको छ। अन्धकारमा नेभिगेट गर्न, तिनीहरूले ठूलो जुङ्गा मदत।
गुफाको Mutants आँखा आवश्यक छैन
आँखा जटिल संरचना रोग र चोट अधीनमा छन्। एक जीवित प्राणी तरिका गुफाको चरम अवस्था मा पायो थियो भने, पूर्ण अन्धकार, यो आँखा को सतहमा क्षति हुन सक्छ, purulent संक्रमण जनावर को मृत्यु प्रकुपित छ। अम्लीय वातावरण पनि आँखा स्वास्थ्य गर्न हानिकारक छ।
रोमानियाली इतिहास गुफाहरु हजारौं नयाँ वातावरणमा अधिकतम मिलाइएको लागि त्यहाँका बासिन्दाहरूले धेरै पुस्ताका प्रदान पर्याप्त समय। यो मिलाइएको क्रमिक उत्परिवर्तन को प्रक्रिया मा आनुवंशिक जानकारी मूल तल राखे, साथै अनुकूली र कमजोरीहरू को हानि मा आधारित छ।
भौगोलिक र पारिस्थितिक विशेषताहरु
गुफा Movil (रोमानिया) काला सागर देखि केही किलोमिटर देश को दक्षिण-पूर्वी भाग मा, Mangalia शहर नजिकै स्थित छ। लग सापट 18 मीटर को एक गहिराई प्रतिनिधित्व गर्दछ। संकीर्ण aisles यो अपेक्षाकृत सानो गुफा को कुल लम्बाइ, माटो ढाकिएका बारेमा 300 मीटर छ। तल त्यहाँ एउटा सानो ताल हो।
यस जब धरती गरेको जलवायु अझ मध्यम एक ट्रपिकल देखि 5.5 मिलियन वर्ष पहिले, बौरिउठ्नुभएको भएको परिवर्तन, बच्न व्यवस्थित कि मात्र जनावर गहिरो न्यानो गुफा भूमिगत बस्न बाँकी गर्नेहरूलाई थिए। Movile गुफा जीवको विभिन्न प्रजातिका आफ्नो भूमिगत जेल को कठोर अवस्था अनुकूल छ कि द्वारा Inhabited भइरहेको पृथ्वीको सबैभन्दा असामान्य पारिस्थितिकी को छ। थप वा कम 31 जो कहिल्यै थप भेट भएको छ स्थलीय र जलीय जीवको 46 प्रकार, अध्ययन हो।
गुफा Movil (रोमानिया): जीवको फोटो
गुफाको बासिन्दाहरू को विशाल बहुमत arachnids, क्रसटेशियन र कीराहरू को वर्ग हौं। जलीय जीव को अठार प्रजाति फ्लैट, राउन्ड (nematodes, rotifers), समावेश annelids, र अन्धो leeches, घोंघे र carnivorous Nepidae। पनि घर springtails, millipedes गुफाको छ।
दक्षिणी रोमानिया Movile गुफा एक पूर्ण अद्वितीय वातावरण छ। निष्ठा र सूर्यका झन्डै पूरा कमी भए तापनि गुफा एक संपन्न वातावरण, जीवन को प्रकारका एक विस्तृत विविधता भरिएको, सानो क्रसटेशियन देखि isopods क्रेफिश, mollusks र arachnids छ। ग्रह बाँकी कारण यस्तो प्राथमिक उत्पादकहरु photosynthesis सक्षम, बिरुवाहरु वा शैवाल रूपमा, जो उच्च जीव खाना श्रृंखला द्वारा खाएको गर्न सकिन्छ गर्न वातावरण समर्थित।
पूर्ण movile गुफा छ जो गाढा भागहरु, प्राथमिक उत्पादकहरु, गुफाको पानी सतह मा अस्थायी जीवित कुरा मा कार्बन डाइअक्साइड रूपान्तरण कि जीवाणुहरु छन्। अन्धकारमा प्राथमिक उत्पादन कारण पानी मा सल्फर यौगिकहरु को ओक्सीकरण र अमोनिया गर्न जीवाणुहरु द्वारा उत्पादित रासायनिक ऊर्जा द्वारा संचालित छ। यो प्रक्रिया chemosynthesis भनिन्छ।
असामान्य भूमिगत वातावरण धेरै लाख वर्ष को लागि बाहिर संसारबाट छुट्टयाएर छ। भूमिगत जीवन यस लुकेका कुना बाहिर संसारमा पूर्णतया स्वतन्त्र छ। गुफा हावा noxious ग्याँसहरु भरिएको छ, तर यो धेरै अनौठो जनावर घर छ। मिथेन र सल्फर-oxidizing जीवाणुहरु ब्याकटेरिया, Fungi, अँध्यारो जीवको जीवन लागि छाँटकाँट को विभिन्न प्रकार समावेश जो जटिल नेटवर्क, समर्थन मुख्य प्राथमिक उत्पादकहरु, खाना हो। यी र अन्य रहस्यमय जीव, अज्ञात मानिसजातिलाई, लामो naturalists वैज्ञानिकहरूले, लेखकहरूले र फिलिम लागि प्रेरणा को स्रोत भएको छ।
जहाँ सेन्ट पीटर्सबर्ग मा जाने: एक स्थान चयन
Novospassky पुल। सीटें
मरुभूमि, अफ्रीका मा स्थित। अफ्रिकी मरुभूमि: को सहारा, को Namib, Kalahari
साराटोभ को सामाजिक-आर्थिक संस्थान: इतिहास, संकाय, शिक्षण शुल्क, समीक्षा
लामो कपाल को एक गुच्छा कसरी बनाउने?
Raccoons र अन्य जनावर बारेमा पहेलियों
Razer क्राकेन प्रो - कुनै पनि खेल चरणको को सपना!
श्रृंखला खेल माफिया: खण्डलाई धेरै रोचक हुनेछ!
गलैँचा कीरा बिटल: वर्णन, विकास चरणमा, खतरनाक के छ र यो कसरी deduced गर्न सकिन्छ
कसरी घर मा तार एक तार मिलाप गर्न